Inhloko eyomile nezinyawo ezimanzi. Umbuzo uwukuthi: ngubani ozosinda kulokhu kuhlushwa? Yilowo kuphela izithelo zakhe eziyisishiyagalolunye-kweshumi zamanzi. Yilokho, ama-Tomato wezitho. Yenza lokho okufunayo, futhi unikeze inani elidingekile lokuswakama, futhi akukho futhi ngaphansi, uyokuhlinzeka.
Efuna ngokugcwele umhlabathi nokukhanyisa, utamatisi okuchelela udinga yonke imithetho yesayensi ye-agrotechnical. Futhi uma izidingo zabo zigcwele ukwaneliseka, ziphendula ngokuthembeka ngalokhu ngokunyuka okukhulu komkhiqizo.
"Inhloko eyomile" kusho ukuthi umswakama awufanele udlule 50%. "Izinyawo ezimanzi" - ukuthi umswakama wenhlabathi akufanele uwe ngaphansi kwezingu-85%, kodwa hhayi ngaphezulu kwe-90%. Ngakolunye uhlangothi lwale gap, utamatisi usezinkingeni. Ukwenyuka komhlabathi kuyomenza izithelo ziphuze, kanti lesi sitshalo sisengozini yezifo ze-fungal. Ukusuka ekumiseni kuyophinde kugule, ukuwa phansi amaqabunga nama-ovari.
Ngakho impendulo yombuzo wokuthi kudingekile kangakanani ukuphuza utamatisi. Ukulandela ngokuqondile inkulumo ethandwayo "okungavamile, kodwa ngokufanele".
"Ngokuvamile" ayikho ngaphezu kweyodwa noma kabili ngesonto. Ngesikhathi esifanayo, senele ngokwanele, ngesikhathi esifanayo singawagcwalisi. I-Tomorore yeSignor ayithandi ukuhlala "emanzini", ngoba ukuchelela ngokweqile kungumswakama okwenyuka womoya, kusobala "hhayi ikhanda elomile". Ukukhula nokuthuthukiswa kwalesi sitshalo kuzovinjelwa kakhulu. Okufanayo kuzokwenzeka ngokuchelela njalo ezinxenyeni ezincane.
Ukungafani kukhona izikhathi ezimbili: lapho isitshalo ngokushesha emva kokutshala sisesezingeni lesithombo, futhi lapho izithelo zihlwithwa. Ngalesi sikhathi, utamatisi okuthambisa njengamanzi, ukusekela inhlabathi esimweni somswakama ophezulu. Isikhathi sonke singase sibe ngokulinganayo. Futhi ukuze ugcine umswakama ezingeni elifanele, ungakhohlwa ngokuhlanganisa i-mulching.
Manje mayelana "ngokufanele". Amanzi, okuhloswe ukuba anisele isayithi elinamatamatisi, kufanele ahambe ngaphansi kwezimpande zezitshalo (kodwa hhayi ngamandla, ukuhlanza umhlabathi nokuveza izimpande) noma emithonjeni. Ngesikhathi esifanayo, inhlabathi iswakanyiswe ngaphandle kokushintsha umswakama womoya. Emagqabeni, izitshalo nezithelo zika utamatisi akufanele zihlale phansi. Ngamunye wabo elangeni elikhanyayo liphenduka i-lens eshiya ukushisa emva kwayo, amanxeba athakaza isitshalo, futhi lapho kuze kufike ukulimala kokuphela ... Ngakho-ke, ukufafaza ngalesi simo akukhuthazwa. Njengoba ubona, akwanele ukunquma ukuthi kungakanani amanzi adingekayo, sidinga futhi ukuthi singayisebenzisa kanjani kahle utamatisi.
Ngendlela, bazokutshela ukuthi kukhona okungahambi kahle. Uma lesi sitshalo singatholi umswakama okwanele, amaqabunga azoba mnyama. Esimo sezulu esishisayo, ngokuvamile bavuna. Ngokuvamile, kufanele kuthiwa utamatisi athela, kuye ngokuthi iminyaka yezitshalo, ukukhula kwawo, uhlelo lokutshala, amandla okumswakama yomhlabathi, ukutholakala noma ukungabikho koqweqwe lwezinambuzane, kanye nezimo zezulu, kudinga okuhlukile. Ngakho-ke, umthamo wamanzi kuzodingeka uzimisele ukuhlolwa.
Esinye isimo esibalulekile sokuphumelela emibhedeni yetamatisi ukushisa kwamanzi. Inketho ekahle yi-+ 24-25 degrees. Futhi kuhle uma kunemvula, ngoba ithambile. Uma lokhu kungatholakali, unganciphisa izinsiza zemvelo ezikhona: umquba noma umquba. Kulabo abangathandi ukugcoba nxazonke ngephunga elimnandi, kunele ukulayisha imiphumela yokusila okugcina emanzini asethelwe ukuma. Ukhula.
Ukuze ukhule ngendlela evamile, utamatisi ukhula futhi uvuthwe, ukuchelela kufanele kuqinisekiswe ukuthi amanzi agxila emhlabathini ngaphambi kokuba aqhume. Uma isimo sesimo sezulu siphelile, ungakwazi ukuphuza izitshalo nganoma yisiphi isikhathi. Ilanga elikhanyayo elilindelekile lilindelwe - kuzodingeka lenziwe ekuseni noma lihanjiswe kusihlwa, amahora amabili ngaphambi kokushona kwelanga.
Zonke izincomo ezingenhla zinikezwa ngabalimi, abathola isivuno esihle samatamatisi kusuka emibhede abo unyaka nonyaka. Kungani ungajoyina?
Top sigqoka lezinyosi ebusika nge ushukela isiraphu. Isikhathi kanye nenani sigqoka
Uyini isiko lobuchwepheshe? izitshalo Technical
Indlela yokuvula i-amasignali uphenduke "Mafia 2" - ukuqeda Onjiniyela isici
Indlela yokudweba i-Winx? Imidwebo elula yokudweba
Ukubuyiselwa izithombe ezindala hlelo "Photoshop"
Theatre "isinemfu kwebhokisi": umlando, repertoire, qembu
Indlela yokwenza tube yokukhulisa umsindo Hi-End ngezandla zakhe?